२०७३ असोज १४ गते शुक्रवार
२०७३ असोज १४ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
स्थानीय र राष्ट्रिय वित्तीय गतिविधि उजागर गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सञ्चारकर्मीबीच अन्तक्र्रिया
प्रस, वीरगंज, १३ असोज/ नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंज शाखाले सञ्चारकर्मीसँग अन्तत्र्रिmया गरेको छ । होटल मकालुमा आयोजित अन्तत्र्रिmयामा सहभागी स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले नेपालको आर्थिक अवस्था ओरालो लाग्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै जाँदा देशमा बेरोजगारी सङ्ख्या बढेको, व्यापार घाटा वृद्धि हुँदै गएको कारण मुलुक दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको बताए । भूकम्प तथा राजीतिक अस्थिरताको कारण जिडिपी बर्सेनि घट्दै गएको प्रवक्ता पंगेनीले बताएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ को तुलनामा २०७२–०७३ मा १.२ प्रतिशतले जिडिपी घटेको र कृषि, गैरकृषि क्षेत्र तथा निर्यात थोरै तथा आयातमा कमी आएको उनले बताए । जनताको आवश्यकताको वस्तुको उत्पादन नबढ्नु, आयात बढ्दै जानु देशको लागि घातक हुने उनले बताए । देशमा रेमिटेन्स बढ्नु गरिबीको सङ्केत हो । युवाहरू विदेशिएका कारण विदेशी मुद्रF नेपालमा आउने र सोहीबाट देश चल्ने गरेको बताए । कर्जामा वृद्धि, उत्पादन नबढ्नु र आयात बढ्नु
बाघ र चितुवाले २ दर्जन पशुचौपाया मा¥यो, जनजीवन अझै आतङ्कित
प्रस, ठोरी, १३ असोज/ ठोरीमा बाघ र चितुवाले अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी पशुचौपाया मारेपछि स्थानीय पशुपालक किसान चिन्तित बनेका छन् । ठोरीको ९ वटै वडामा डुलेर बाघ र चितुवाले पशुचौपाया मार्न थालेपछि पशुपालक किसानहरू मारमा परेका हुन् । अहिलेसम्म तीनवटा गाई, दुईवटा भैंसी, १८ वटा खसीबाख्रा बाघ र चितुवाले मारिसकेको छ । खोरमैं आएर खसीबाख्रा मार्न चितुवा पल्केपछि ठोरी–५ का वीरवहादुर गोलेले सबै खोर खाली हुने गरी खसीबाख्रा बेचिदिएका छन् । गोलेले भने–“खोरमा बाख्रा हुँदा मान्छेकै ज्यान जोखिम हुने भयो । त्यसैले सबै बाख्रा बेचिदिएँ । खोरमा १७ वटा बाख्रा थिए । बुधवार राति चितुवाले घर वरिपरि आतङ्क मचाएकोले सबै खसीबाख्रा बेचिदिएँ ।” बाख्रापालन गरेर जीवनयापन गरिरहेका गोले अब कसरी जीवन गुजारा गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । उनको मात्रै चितुवाले ३ वटा खसीबाख्रा मारेको थियो । गोलेजस्तै अन्य बाख्रापालक किसानहरू पनि चिन्तामा छन् । सम्बन्धित निकायले गाउँमा सताउने बाघ र चितुवालाई व्यवस्थापन नगरे पशुपालक किसानहरूको पेशा धरापमा पर्ने देखिन्छ । बिहीवार बिहान मात्रै ठोरी–१ मगर टोलमा इन्द्रकुमारी थापा
यस वर्ष ठोरीमा धान उत्पादनमा ¥हास आउने
प्रस, ठोरी, पर्सा, १३ असोज/ ठोरीमा यस वर्ष धानको उत्पादनमा २८ प्रतिशतले ¥हास आउने सम्भावना देखिएको छ । यसपटक समयमा पर्याप्त वर्षा भए पनि जङ्गली जनावरले थुप्रै क्षति पु¥याएको कारण झन्डै २ हजार मेट्रिक टन धान कम उत्पादन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । धान रोपेदेखि नै बेलाबेलामा पानी परिरहे पनि जङ्गली जनावर हात्ती, बँदेल, चित्तल, घोडगधा, गैंडा आदिले क्षति पु¥याएको कारण धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने स्थानीय शिक्षक केशवप्रसाद रेग्मीले बताए । दक्ष कृषि प्राविधिक, रासायनिक मल, सिंचाइको अभाव, उन्नतजातको बीउ, विभिन्न खालका रोग आदिले धान उत्पादनमा कमी आउने देखिए पनि सबै भन्दा बढी असर जङ्गली जनावरले पारेको उनको भनाइ छ । रेग्मीले भने–“हात्तीले एकै रातमा थुप्रै धानबाली खानुका साथै माडेर नोक्सान गर्दै आइरहेको छ । बँदेलले पनि त्यस्तै क्षति पु¥याएको छ । बँदेलले खेतको आली भत्काइदिनुका साथै धानबाली माडिदिन्छ । खेतमा पानी जम्न नसकेपछि उत्पादन कम हुने नै भयो । चित्तलको बथान नै आउने भएकोले त्यसले पनि ठूलो क्षति गरेको छ । धानखेत ती जनावरको चरनस्थलजस्तै बनेको छ ।” जङ्गली जनावरले लगाएको खेतीसमेत उ
बारामा बसेर पर्सामा जग्गाको कर बुझाउनुपर्ने
प्रस, परवानीपुर, पर्सा, १३ असोज/ पर्सा जिल्ला साबिक लिपनीबिर्ता वडा नं. ७, ८, ९ का बासिन्दाको बसोबास बाराको लिपनीमालवडा नं. ७, ८ र ९ मा सरेको छ । लिपनीमालको चैनपुरमा एउटा छुट्टै बिर्ताटोल छ । तिनका नागरिकता, जग्गा जमिनको पुर्जा, जग्गाको कारोबार पर्साबाट नै हुने गरेको छ । बसाइ र गाविसको सेवा सुविधा बाराको लिपनीमालबाट पाउँछन् । साबिक लिपनीबिर्ता–७, हाल लिपनीमाल–८ बस्ने ७० वर्षीय शङ्कर राउत भेडिहरले ती वडाको १३२ बिघा जग्गाको लगत मालपोत कार्यालय, पर्साद्वारा कट्टा नगरिएकोले निकै लामो समयदेखि कार्यालयको कामकाजमा झन्झट हुने गरेको बताए । जग्गा कर वीरगंज उपमहानगरपालिकालाई तिर्नुपर्छ भने मालपोत कार्यालय, पर्साबाट जग्गा पास, नामसारी, अंशबन्डालगायत काममा विभिन्न कार्यालयको दुःख भोग्नु परेको अर्का पीडित जवाहिर भगत रामले गुनासो गरे । साबिक लिपनीबिर्ता गाविस हाल नगरपालिकामा गाभिएकोले करको दायरा पनि बढेको छ । यसले पीडामाथि पीडा थपेको बिर्ताका गाउँले बताउँछन् । जग्गाको राजस्व नगरपालिकाले उठाउँछ तर नगरपालिकाबाट हामीले केही सुविधा नपाएकोले यस्तो गलती धेरै समयसम्म सहन नसक्ने उनीहरू बताउ
निजगढमा पूmटबल प्रतियोगिता शुरु चपुर युवा र बागभैरव युवा क्लब विजयी
प्रस, निजगढ, १३ असोज/ नजिकिंदो बडादशैं, दिपावली र छठको अवसरमा बिहीवारदेखि निजगढमा पूmटबल प्रतियोगिता शुरू भएको छ । आज दुई चरणको खेल सम्पन्न भएको छ । चपुर युवा क्लब, चन्द्रनिगाहपुर र नव जनजागृति युवा क्लब निजगढबीच भएको पहिलो चरणको खेलमा ० का विरुद्ध १ गोल गरी चपुर विजयी भएको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणको खेल द गड्डाज युवा टिम निजगढ र बागभैरव युवा क्लब निजगढबीच भएको थियो । सो खेलमा ० का विरुद्ध ४ गोल गरी बागभैरव युवा क्लब विजयी भएको छ । सो प्रतियोगितालाई एक समारोहबीच प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव, निजगढ निवासी युवराज लामाले उद्घाटन गरेका थिए । खेल जीवनका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै स्वस्थ रहन खेल खेल्न उनले सबैलाई आग्रह गरे । स्वस्थ रहन उमेर, शरीर अनुसार खेल छनोट गरी निरन्तर खेल्दा स्वस्थ हुनाका साथै तनावमुक्त हुने, जसले सकारात्मक सोचमा सघाउ पुग्ने प्रमुख अतिथि लामाले बताए । आपूm सचिव पदमा रहे वा नरहे पनि खेल र खेलाडीका लागि जहिले पनि सहयोग गरिरहने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कुनै पनि खेलको आयोजना गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो भन्दै सफलताका साथ प्र
अमृतद्वारा युवाजागृति पराजित
प्रस, ठोरी, १३ असोज/ युवा जागृति क्लब ठोरीलाई फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गर्दै अमृत युवा क्लब सुन्दरबस्ती विजयी भएको छ । ब्यारेक खेल मैदानमा बिहीवार भएको खेलमा सुन्दरबस्तीले युवा जागृतिलाई ० को विरुद्ध ६ गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो । अमृतलाई जिताउन कृष्ण शाक्य एक्लैले ह्याट्रिक गरेका थिए । त्यस्तै अमृतका लागि आदित्य शाक्यले २ र शत्रुघ्न चौधरीले १ गोल गरेका थिए । हारसँगै युवा जागृति क्लब प्रतियोगितबाट बाहिरिएको छ । वनशक्ति युवा क्लबले आयोजना गरेको प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रवार बढनिहार एकता क्लब र थ्री स्टार युवा क्लब ठोरी–३ बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक क्लबका सचिव विशाल क्षत्रीले जानकारी दिए ।
कराँतेका महिला–पुरुष खेलाडीको छनोट
प्रस, वीरगंज, १३ असोज/ बृहत् सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता–२०७३ को लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साले बिहीवार सितोरियो कराँते प्रतियोगिताका लागि ९–९ जना महिला–पुरुष र कुस्ती खेलका लागि ८ जना खेलाडी छनोट गरेको छ । कराँतेतर्पm पुरुषमा ५० केजी तौल समूहमा विशाल बर्मा, ५५ केजीमा सोनु सिंह, ६० केजीमा विशाल लामा, ६६ केजीमा संजु साह, ७४ केजीमा राजेश्वर साह, ८४ केजीमा सुदेश बल र अविनाश चौधरी, लालबाबू मण्डल, नसीम अहमद, राकेश साह, दिलीप पटेल त्यस्तै महिला तर्पm ४५ केजीमा आयुषा श्रेष्ठ, ५० केजीमा एलिशा लामा, ५५ केजीमा अनिता कुमारी, ६१ केजीमा भावना कुमारी, ६७ केजीमा नम्रता त्रिपाठी, रोशनी तथा ज्योति चौहान रहेका छन् ।
ई. गोपाल श्रेष्ठ प्रोफेसनल मेनेजमेन्टको अभाव जहाँतहीं छ — सरकार, उद्योग–व्यवसाय, स्कूल, कलेज, अस्पताल आदि । प्रोफेशनल मेनेजमेन्टले परिणाम/आउटपुटमा जोड दिन्छ । दायित्व लिनु–दिनुपूर्व यसको आउटपुट–यसको डिटेल–जस्तै गुणस्तर, समयसीमा र लागतमा छलफल गरी सम्झौता हुन्छ । आउटपुटको जिम्मा लिएर पद ग्रहण गरेपछि आउटपुट दिन नसक्दा स्वेच्छाले पद परित्याग गर्ने र नगरे बिना मोलमोलाइ/हिच्किचाहट पदमुक्त गर्नु गराउनु नै प्रोफेसनल मेनेजमेन्टको विशेषता हो । हाम्रो सरकार र सरकारी संयन्त्रमा प्रोफेशनल मेनेजमेन्टको अनुपस्थिति भएकोले नै जहाँतहीं अस्तव्यस्तता देखिन्छ । निजी क्षेत्र विशेषगरी बैंक तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा प्रोफेशनल मेनेजमेन्टको उपस्थिति द¥हो बन्दै गएको आभास हुन्छ । प्रोफेशनल मेनेजमेन्टले करार सेवालाई महŒव दिन्छ र पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था पनि लचिलो राख्न चाहन्छ । प्रोफेशनल मेनेजमेन्टले जति पनि कमाएर दिनेलाई जति पनि भृुक्तानी गर्न इच्छा राख्छ भने कमाउन नसक्नेलाई शून्य भुक्तानी गर्ने आकाङ्क्षा राख्छ । टन्न कमाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनो कार्यकारी प्रमुख/ऋभ्इ लाई मासिक
राष्ट्रिय विपत्तितर्फ उन्मुख नेपाल
विश्वराज अधिकारी धेरै मानिसलाई यस तथ्यमा विश्वास नहुन सक्छ । धैरे व्यक्तिलाई उठाउन थालिएको यो विषय हल्ला वा सतही लाग्न सक्छ । तर जसले जुनसुकै तरिकाले लिए पनि नेपाल अहिले राष्ट्रिय विपत्तितर्फ उन्मुख छ । नेपालले राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा अहिले ठूलो राष्ट्रिय–निराशा व्याप्त रहेको कारण यो दोस्रो राष्ट्रिय विपत्ति आउन थालेको हो । अहिले मुलुक राष्ट्रिय–निराशाको स्थितिमा रहेको छ । यो तथ्यलाई स्विकार्नुको विकल्प छैन । यसलाई नस्विकार्नु सत्यको सामना गर्नबाट पन्छिनु हो । बरु यो राष्ट्रिय विपत्तिको असर कसरी कम गर्न सकिन्छ, समयमा नै सोच्न आवश्यक छ । २००७ सालपछिको स्थितिमा नेपालले पहिलो राष्ट्रिय विपत्ति भने माओवादी(सशस्त्र सङ्घर्ष कालमा देखेको थियो । माओवादी–सङ्घर्ष कालमा नेपालीहरू यति भयभीत भएका थिए कि घरभित्र हुँदा वा बाहिर रहेको अवस्थामा, राति जीवित घर फर्किन सकिन्छ वा सकिंदैन भनी हर क्षण त्रसित रहन्थे । त्यो कालमा नेपालीहरू यतिसम्म हृदयहीन भएका थिए कि आप्mनै दाजुभाइ दिदीबहिनीको हत्या गरेकोमा रमाएर उत्सवसमेत पनि मनाउँथे । बीभत्स हत्या गर्थे । प्रत्य
मूल्यवृद्धि, राजस्व छली र बजार अनुगमनको औचित्य
शीतल महतो दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएका छन् । चाडपर्व भनेको नै आफन्त जमघट हुने, भेटघाट हुने, पूजापाठ र मनोरञ्जन गर्ने माध्यम हुन् तर कतिपयले यसलाई देखाउनकै लागि भए पनि अनावश्यक वस्तु खरिद गर्ने तथा एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेका पनि छन् । केही वर्षदेखि चाडपर्व पनि प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन् । महँगा लुगा लगाउने, गहनाको प्रदर्शन गर्ने, अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने जस्ता क्रियाकलापको विकास भएको देखिन्छ यहाँ । हुनेखाने वर्गमा अरूको देखासिकी गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ भने हुँदा खाने वर्गको दैनिकी चौपट भएको छ । यतिखेर उपभोग्य, लत्ताकपडाजस्ता वस्तुहरूको बजार मूल्य आकाशिएको छ । गत वर्षदेखि नै कायम रहेको दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीतिको प्रभावले आम उपभोक्ता प्रभावित छ । पैसा हुनेले त बजारको महँगीमा पनि खरिद गर्न सक्ला तर श्रम गरी बिहान–बेलुकी हातमुख जोड्ने श्रमिकको दैनिकी भने महँगीले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ । झन्डै २१ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् करिब ६५ लाख जनसङ्ख्या अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ । गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेको नेपाली ज
वीरगंज उच्च अदालतको उत्साह र समस्या
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव वर्तमान संविधानले सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको परिकल्पना गर्दै हरेक प्रदेशमा एकएकवटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनरूप सरकारले ७ वटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत र पहिलेको पुनरावेदन अदालतलाई अस्थायी इजलासको रूपमा कायम गरेको छ । नुवाकोट र वीरगंजमा उच्च अदालतको इजलास गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था बनायो, जुन निकै सकारात्मक एवं गौरवको विषय हो । २ न. प्रदेशको उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास वीरगंज तथा राजविराज रहने गरी सरकारले भाद्र २९ गते निर्णय ग¥यो । सरकारको यो निर्णयले बारा, पर्सा, रौटहटका मुद्दाहरूको पुुनरावेदन अदालत हेटौंडामा हुँदै अFएको सुनवाइ वीरगंजमा हुने भनेर भाद्र ३० देखि नै रोकिएको छ । बारा, पर्सा, रौटहटका उपभोक्ता ग्रामीण तहबाट सदरमुकाम आई हेटौडा पुगी सेवा लिई घरसम्म पुग्नु निकै खर्चिलो झन्झटिलो थियो । यसर्थ वीरगंजमा उच्च अदालत गठन हुने भएर निकै खुशी एवं उत्साहित छन् । वीरगंजमा अस्थायी इजलास स्थापना हुँदा यी तीन जिल्लाको जनतामध्ये कसैले विरोध नगरी उत्साहित भएको देखिन्छ । जसलाई सङ्घीयताबाट पहिलो उपलब्धि पाएको महस
नेपालमा हिन्दी भाषाको सान्दर्भिकता
श्रीमन्नारायण भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य एवं विज्ञान कुनै एउटा भूगोलभित्र सीमित रहन सक्दैन । जुन देशमा जति धेरै भाषा बोलिन्छ, त्यो देश सांस्कृतिकरूपमा त्यति नै धनी र समृद्ध मानिन्छ । हाम्रFे देशमा त अहिले राष्ट्रको प्रमुख भाषा नेपालीकै अस्तित्व खतरामा पर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस दिशामा देशका भाषाविद्हरू चनाखो भएका छन् तथा यसको मौलिकतामाथि कुनै पनि किसिमको प्रहार नहोस् भन्ने माग पनि गरिरहेका छन् । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक देशमा सबै भाषा एवं संस्कृतिले समानरूपमा राजकीय संरक्षण पाउनुपर्दछ । भाषिक विविधतालाई देशको अमूल्य निधि ठानी यसको विकासमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ तर देशमा अहिलेसम्म कायम रहिआएको एक भाषाको नीतिका कारण अन्य भाषाको विकास हुन सकिरहेको छैन । गत साता राजधानी काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा देशका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि हिन्दी भाषाको सन्दर्भमा अलिकति सकारात्मक कुरा गरेका थिए तर त्यसलाई अनावश्यकरूपमा विवादित बनाउने काम भयो । यस काममा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि बढी सक्रिय नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरू देखि
सरकार पनि सचेत हुनुप¥यो
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले राजमार्गमा गुड्ने प्रायःजसो सवारीका साधनहरूको पछाडि अनि ट्राफिक नियम लेखिएका साइनबोर्डहरूमा लेखिएको हुन्छ ‘विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, बेसरी गए कुन्नि ’ । सवारी चालकहरू त्यस्तो सन्देशमूलक सूचना पढ्छन तर व्यवहारमा उतार्दैनन् । परिणाम बेस्सरी गाडी कुदाउँछन् अनि बेला–बखत दुर्घटनाको शिकार हुन्छन् । सवारी चलाएसरह देश चलाउनेहरूले पनि यो सन्देशमूलक सूचना अनुसरण गर्न जरुरी छ । वैदेशिक अनुदान सहयोग पाउनका लागि हतारहतार बिनाआधार, पूर्वाधार नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरूको घोषणा गरेको प्रतिफल अहिले नगरपालिका भएका स्थानमा उमावि तहको अध्ययन सुविधा छैन, राम्रो स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल छैन, बैक वित्तीय संस्था छैन, सडक, नाला, बत्ती भद्रगोल अवस्थामा छ । सरसफाइको नियमितता छैन, फोहर व्यवस्थापनको कुरा छाडौं, वीरगंज उपमहानगरपालिका जस्तो पुरानो नगरपालिकामा अहिले बल्ल त्यस्तो व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पहल भइरहेको छ । नेपाली उखान छ ‘हडबडको काम गडबड’ सरकारले करिब डेढ वर्ष पहिले घोषित नगरपालिकाको हाराहारीमा थप नपा घोषणा गरेर उखान चरितार्थ गरेको छ । बारा जिल्लामा कलैय
२०७३ असोज १३ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
साझेदारी चुनाव भएन, सरकारले सुरक्षाको अडको थाप्यो
प्रस, वीरगंज, १२ असोज/ विन्दवासिनी कोइलाभार साझेदारी वन व्यवस्थापनको समितिको असोज १२–१३ गते हुने निर्वाचन रोकिएको छ । सुरक्ष्Fा दिन नसकेको भन्दै गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई आधार मानी निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको हो । १२ गतेदेखि शुरु हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र अधिकांश मतदाता निर्वाचनस्थलमा पुगिसकेको क्रममा अचानक निर्वाचन स्थगित भएको भन्दै त्यहाँ लगाइएको टेन्टमा आगजनी गरी नष्ट गरिएको जिल्ला वन कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । आज दिनभरि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले जिल्ला वन कार्यालयलाई सुरक्ष्Fा गरेको थियो । नेकपा एमाले समयमा चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै चुनावी रणनीतिमा उत्रेको थियो । नेका चाहिं चुनाव रोक्न सफल भएको देखिन्छ । २०६९ असार १८ गते हुने चुनाव १७ गते राति नै स्थगित भएको र त्यसपछि चार वर्षपछि असोज १२–१३ गते चुनाव हुने सर्वदलीय समितिले निर्णय गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख वन अधिकृत चन्द्रदेवलाल कर्णलाई विभागले फिर्ता बोलाएको थियो । कर्णले चुनाव नगर्दा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने करोडौं मूल्य बराबरको १५ हजार क्युफिट काठ नष्ट हुने अवस्थाम
उच्च अदालतको अस्थायी इजलासमा पेशी चढ्यो, जिल्ला प्रशासनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी
प्रस, वीरगंज, १२ असोज/ उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले आज पहिलो पेशीको सुनुवाई गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साविरुद्ध तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले नारायणी यातायात बस व्यवसायी सङ्घ वीरगंज कार्यसमिति असोज ७ गते विघटन गरी बृजकिशोर कलवारको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति बनाएको थियो । तोकिएको समयमा साधारणसभा नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासनले कार्यसमिति विघटन गरेको थियो । सोविरुद्ध सङ्घका अध्यक्ष्F विनोद श्रेष्ठले उच्च न्यायालयमा निषेधाज्ञाको लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदकको तर्पmबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादवको बहसपछि न्यायाधीश उदयप्रकाश चापागाईको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश चापागाईले कार्तिक २ गते जिल्ला प्रशासन र निवेदक पक्षलाई अदालतमा हाजिर हुन बोलाएको छ भने त्यो अवधिसम्म असोज ७ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनेर तत्काल निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ ।
नेकपा एमाले बाराको अधिवेशन शुरु
प्रस, निजगढ, बारा, १२ असोज/ सबै दलको सहमतिमा जारी भएको संविधान केही दलले चाहँदैमा संशोधन हुन नसक्ने नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले बताएका छन् । नेकपा एमाले बाराको ९ औं जिल्ला अधिवेशनका प्रमुख अतिथि रहेका न्यौपानेले अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गदै सो कुरा बताएका हुन् । कोल्भीमा आयोजित उद्घाटन समारोह्लाई सम्बोधन गर्दै उनले केही दलले असन्तुष्टि जनाउँदैमा बल्लतल्ल जनताको पक्षमा जारी भएको संविधान संशोधन हुन सक्दैन उनले भने । तर, सबै दल सहमत भए संविधान संशोधन हुन सक्ने पनि बताए । जारी संविधानले सबै जातजाति, धर्म सस्कृति, क्षेत्र, हक अधिकारलाई सम्बोधन गरेको दाबी गर्दै सस्तो, मिथ्या, गलत प्रचारको पछि नलाग्न असन्तुष्ट दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । एमालेका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक जस्तोसुकै सा¥होगा¥हो परिस्थितिमा पनि डगमगाउँदैनन्, विचलित हुँदैनन् । एमाले जनताको पार्टी हो भन्दै एमाले पहिले, अहिले पनि र जहिले पनि देश, जनताको पक्षमा रहेको छ र रहन्छ उनले भने । नेकपा एमाले औचित्यको आधारमा संशोधन गर्न तयार रहेको बताउँदै नेता न्यौपानेले सत्तारूढ दलले स
पोखरियामा एउटा मात्रै बैंक सेवाग्राही वीरगंज आउन बाध्य
प्रस, पोखरिया, १२ असोज/ पोखरियामा कृषि विकास बैंक स्थापना भएको करिब एकवर्ष हुन लाग्दा पनि बैकिङ्ग सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । माओवादी जनयुद्धमा विस्थापित कृषि विकास बैंक ११ महिना अघि पुनस्र्थापित भएको हो । बैंकले कर्जा असुली र ऋणका लागि कागजात तयार गर्नसम्मको मात्र काम गर्दै आएको छ । रकम जम्मा गर्न, चेक साट्न, रेमिटेन्सको रकम लिन र बैंक ग्यारेन्टीका लागि सेवाग्राहीलाई पोखरियाबाट लामो दूरी तय गरी वीरगंज आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विद्यमान छ । कृषि विकास बैंक, पोखरिया शाखाका प्रबन्धक सुरेश चौधरीले सेवा विस्तारका लागि माथिल्लो निकायमा पत्राचार भइसकेको र केही महिनामैं थप सेवा प्रदान गरिने माथिल्लो निकायबाट आश्वासन आएको बताए । उनले हाल कर्जा असुली र कर्जा लिनेलाई आवश्यक कागजात तयार पार्नेसम्मको अधिकार भएको र आपूmहरूले सोही अनुरूपको काम गर्दै आएको जानकारी गराए । प्रबन्धक चौधरीले सेवा विस्तारका लागि दैनिक मानिस शाखामा आउने गरेको बताए । पोखरियामा कृषि विकास बैंकले सेवा प्रदान गर्नु अघि एचएनवी बैंकले सेवा शुरू गरेको थियो । हाल मर्जरपछि विभोर सोसाइटी विकास बैंकमा परिणत सो ब
खैरो हेरोइनसहित दुईजना पक्राउ
प्रस, रौतहट, १२ असोज/ लागू औषध हेरोइन भारतबाट खरिद गरी नेपाल भिœयाएको अवस्थामा गरुडा बजारको मूलगेटमा विशेष सूचनाको आधारमा दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चन्द्रपुर नगर पालिका–१ निवासी विनोद लामा र गणेश लामा रहेका छन् । गरुडा–२ मा उनीहरू चढेको मोटरसाइकल खानतलासी गर्दा १९ ग्राम लागू औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, गरुडा बजार रौतहटको प्रहरी हिरासतमा राखी लागू औषध खैरो हेरोइन खरिद बिक्री, ओसारपसार मुद्दा दर्ता गरेको जिप्रका रौतहट प्रहरी उपरिक्षक डा गणेश रेग्मीले बताए । मोबाइलको ब्याट्री राख्ने ठाउँमा प्लास्टिकमा पोको पारी लुकाइराखेको थप २७ ग्राम हेरोइन फेला परेको थियो । प्रहरीले ४६ ग्राम हेरोइन बरामद भएको बताएको छ ।
सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बक्सिङ्ग र भलिबलका खेलाडी छनोट
प्रस, वीरगंज, १२ असोज/ विराटनगरमा मङ्सिर महिनामा हुने बृहत् सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता–२०७३ को लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साले जिल्लाभरिका २२ वटा खेलका खेलाडीहरूको छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । छनोट भएका खेलाडीहरू सो प्रतियोगितामा भाग लिने जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साका अध्यक्ष्F सुदीप पौडेलले बताए । आज सम्पन्न छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत वीरगंजमा बक्सिङ्ग र जनता उमावि पकडिया बढनियारमा महिला र पुरुष भलिबल खेल सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न खेलमा बक्सिङ्गतर्पm ८० केजीमा मंजितकुमार पटेल, ६४ केजीमा सुमनकुमार दास, ६० केजीमा उत्तमकुमार रौनियार र ५२ केजीमा अरुणकुमार साह गरी जम्मा ४ जना खेलाडी छनोट भएका छन् । त्यसैगरी भलिबलमा १५ जना पुरुष तथा १५ जना महिला छनोट भएका छन् । बक्सिङ्गका संयोजक श्रीनिवास महतोको संयोजकत्वमा सम्पन्न छनोट प्रतियोगितामा बक्सिङ्ग प्रशिक्ष्Fक वीरेन्द्र भट्टराई, भलिबल संयोजक सपना बस्नेत, प्रशिक्ष्Fक हरीबहादुर श्रेष्ठ र कैलाश चौधरीको उपस्थिति थियो ।
राजमार्गहरू किन बनिरहेछन् मृत्युमार्ग
सञ्जय साह मित्र साँच्चीकै राजमार्गमा यात्रा गर्न सबै डराउन थालेका छन् । हरेक दिन कुनै न कुनै दुर्घटनाको खबर आइरहेको छ । साना दुर्घटनाका खबरहरू त स्थानीय सञ्चारमाध्यममा समेत स्थानीयले चासो देखाउन छाडिसके । सामाजिक सञ्जालहरूमा दुर्घटनाका फोटा तथा समाचारहरू भरिएका हुन्छन् । सबैतिरबाट निरन्तर दुर्घटनाका खबरहरू आइरहँदा समाजमा यात्राप्रति नै नकारात्मक दृष्टि बनिरहेको छ । यात्राबारे मानिसमा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै जानु पक्कै पनि राम्रो होइन । समाजमा यात्रा भन्नु नै जोखिमपूर्ण काम हो भन्ने पर्न गएमा समाज विकासका अन्य क्षेत्रहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । समाजलाई अहिलेको अवस्थाबाट अगाडि बढाएर अलिकति भए पनि नकारात्मक प्रभाव कम गर्नु आवश्यक छ । देश–विदेश घुमिरहनेहरूले भन्ने गरेका छन् –नेपालको सडक यातायातको लायक नै छैन । गएको साउन महिनामा भारतको एकतर्फी करिब एक हजार एक सय किलोमिटर लामो यात्राको क्रममा दुर्घटना भएको पाइनँ । हामीले पूरै अव्यवस्था भन्ने गरेको बिहारमा पनि सडकको हाम्रोजस्तो अवस्था रहेको देखिंदैन । बरु धेरै लामो समयसम्म जाम भएको भने देखिन्छ तर जाममा समेत धेर
गण्डक नहर र सडक सुविधा
गण्डक नहर अहिले पर्सा मात्र होइन, बारा र रौतहटको पनि जीवनरेखा बनेको छ । त्यही जीवनरेखाको कन्तबिजोग देखिएको छ । नहरको एउटा पाटोलाई सडक मानेर हाम्रो सरकारले आप्mनो अक्षमता लुकाएको छ । खासमा यो सडक नै होइन, हो भने पनि यातायातका लागि होइन । गण्डक नहरको एउटा पाटोलाई सडक भनेर नहरको संरचना भत्काउने काम मात्र भइरहेको छ । यस कुराको विरोधमा दशकौंदेखि लेखिंदै आएको छ, तर कर उठाउने लोभले स्थानीय निकाय तथा अकर्मण्यता लुकाउने लोभले सरकारले नहर मरम्मत–मार्गलाई जिल्लाको मुख्य सडक मानिरहेको छ । सरकार यसबाट खुशी छ, उसको तथ्याङ्कमा सडकको लम्बाइ बढेको छ, स्थानीय निकाय खुशी छ, केही नगरी सडक शुल्क उठाउन पाइरहेको छ, जनता पनि खुशी छ, नहरमा मोटर चल्दा उसको यातायात सहज भएको छ । यसमा मूल सरोकार सरकार र किसानको हो । एउटा पक्ष, सरकारले आँखा चिम्लेको छ भने किसान चाहिं घर–आँगनमैं मोटर चढ्न पाएर मख्ख छ । नहरको मरम्मत–सम्भार तथा निरीक्षणका लागि एकातिरको कान्लालाई सर्भिस मार्गको रूपमा विकसित गरिएको हुन्छ । नहर भनेपछि त्यसमा विभिन्न भौतिक संरचना हुन्छ । पुल हुन्छ, साइफन हुन्छ, एक्वेडक्ट हुन्छ । समय–समयमा यिनको म
२०७३ असोज १२ गते बुधवार
२०७३ असोज १२ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
काम गर्ने डरले मन्त्रालयको पत्र लुकाइयो
प्रस, वीरगंज, ११ असोज/ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रशासन विभागले दुई हप्तादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र लुकाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट व्यवस्थापिका संसद्को मिति २०७३–०५–२३ गतेको बैठकमा सार्वजनिक महŒवको विषयमा बुँदा नं. १९ संशोधन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक कार्यालयले हालसम्म दिंदै आएको सेवाको समय परिवर्तन गरी बिहान १० बजदेखि ५ बजेसम्म बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न पठाएको पत्र प्रशासन फाँटले लुकाएको बुझिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको चलानी नं. ७/९८२ नं. को पत्र कार्यान्वयन नगर्न नारायणी उपक्ष्Fेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले प्रशासनलाई दबाब दिएपछि पत्र लुकाइएको स्रोतले जानकारी गराएको छ । अहिले १ बजेसम्म बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन हुँदै आएकोमा ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरेकोले डाक्टरहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रको बेवास्ता गरी अस्पताल प्रशासनलाई सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिंदै आएको समाचारमा जनाइएको छ । देशभरिका सरकारी अस्पतालले बिहान १० बजदेखि साँझ ५ बजेसम्म सेवा दिनुपर्ने सो पत्रमा उल्लेख छ । यस विषयमा अस्पताल व
पूर्वाधारको कमीले उच्च न्यायालय वीरगंजको इजलास सञ्चालनमा ढिलाई
प्रस, वीरगंज,११ असोज/ जनकपुर उच्च अदालतको पर्सा, बारा, रौतहटको मुद्दा हेर्ने अस्थायी इजलास वीरगंजमा स्थापना भएको एक साता बित्दा पनि दर्ताबाहेक इजलास सञ्चालनमा आएको छैन । अस्थायी इजलासको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकोले पेशी चढ्न सकेको छैन । अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता हुनेसम्मको काम भइरहेको बताइएको छ । अस्थायी इजलास असोज ५ गतेदेखि नै सञ्चालनमा आउने उद्घाटन कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो तर अहिले एक साता बित्दा पनि इजलास सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यस विषयमा उच्च न्यायालय अस्थायी इजलास वीरगंजका मुख्य न्यायाधीश उदयप्रकाश चापागाईंले इजलास सञ्चालनको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको बताए । उनले दशै बिदा अगाडि एउटा इजलास सञ्चालनमा आउने बताए । हाल १५ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको अस्थायी इजलास वीचिकालिमा आज ७ जना न्यायाधीश हाजिर भइसकेका छन् । न्यायाधीशहरू हाजिर भए पनि इजलासको काम हुन नसकेको कारण पेशी चढ्न सकेको छैन । मुख्य न्यायाधीश चापागाईंले अहिलेसम्म पुनरावेदन पत्र–७, रिट–४, अदालती बन्दोबस्त मुद्दा–१, बेरित पैmसला विरुद्धको मुद्दा –९, धरौटी तारेख–२ वटा मुद्दा दर्ता रहेको बताए ।
श्रीराम सुगर मिल्समा किसानद्वारा तोडफोड, लाखौंको क्षति
प्रस, गरुडा, ११ असोज/ श्रीराम सुगर मिल्समा किसानहरूले तोडफोड गरेका छन् । उद्योगपतिले किसानहरूलाई भुक्तानी दिन तयार भए पनि उद्योगका कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनको कारण भुक्तानी नहुने भएपछि किसानहरूले मङ्गलवार उद्योगमा तोडफोड गरेका छन् । बितेको दुई आर्थिक वर्ष उखु किसानहरूले उद्योगलाई बेचेको उखुको मूल्य भुक्तानी पाउन बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका छन् । किसानहरूले आन्दोलनकै क्रममा राजधानी काठमाडौं पुगेर उद्योगमन्त्रीलाई गुहारेका थिए । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा उद्योगपति र उखु उत्पादक सङ्घबीच् भुक्तानीको लागि गत हप्ता मात्र सहमति भएको थियो । उद्योगपति र किसानबीच भुक्तानीको लागि सहमति भए पनि तलब वृद्धिको माग गर्दै उद्योगका कर्मचारीहरूले उद्योगको कुनै पनि काम नगर्ने भनी आन्दोलनमा उत्रेपछि किसानहरू आक्रोशित भएका थिए । कर्मचारीको आन्दोलनको कारण किसानहरूले दशैं अघि सहमति अनुसार रकम नपाउने भएपछि तोडफोडमा उत्रेका थिए । आक्रोशित किसानहरूले आवास क्षेत्रको बैठक तथा कार्यालयको सोफा, टेबुल, कुर्सी तथा झ्याल र ढोकामा तोडफोड गरेका छन् । केही कार्यालयको कुर्सी बाहिर निकालेर किसा
गण्डक नहरको बाटो बिग्रँदा सास्ती
प्रमोद यादव, रङ्गपुर, पर्सा, ११ असोज/ पर्साको गण्डक नहरको बाटोको अवस्था बिग्रेपछि ग्रामीण बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । जगरनाथपुर, बलिरामपुर, बहुअरी पिडरी, पटनी, लखनपुर, लमरिया, झखरा, मसिहानी, भिखमपुर र जानकीटोलासम्म जाने बाटोमा ठूल्ठूलो खाल्डो परेपछि सवारीसाधन र यात्रीहरू समस्यामा परेका हुन् । गण्डक नहरको बाटो बिग्रेपछि आवतजावत गर्न कठिनाइ भएको पटनी निवासी शिवशङ्कर यादवले बताए । यस विषयमा स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालसँग बुझ्दा उनले गण्डक नहरको बाटो निर्माण गर्ने जिम्मा सडक डिभिजनको भएको बताउँदै पन्छिएका थिए । नहर सडकको दुरवस्थाबारे बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो नदिएको बलिरामपुर निवासी अजय यादवले गुनासो गरे ।
वीरगंजमा तरकारीको मूल्य आकाशियो
प्रस, वीरगंज, ११ असोज/ वीरगंजमा हरियो तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ । छिमेकी जिल्ला बारा, मकवानपुर अनि भारतबाट आउने हरियो तरकारीको मूल्य एकसातादेखि वृद्धि भएको हो । कुनै बेला सबैभन्दा महँगो भएको प्याज अहिले बजारमा सबैभन्दा सस्तो छ । थोकमा प्रतिकिलो रु २५ छ भने खुद्रामा रु तीसमा बिक्री भइरहेको छ । प्याजको तुलनामा अहिले आलु महँगो भएको छ । पुरानो आलु प्रतिकिलो थोकमा रु ४० र नयाँ आलु रु ५० सम्म छ । वीरगंज बजारमा पाइने हरियो तरकारीमा सबैभन्दा बढी बोडी, कोभी, भेडे खुर्सानी, करैला, खुर्सानी प्रतिकिलो सयको हाराहारीमा छ । यसैगरी काँक्रो रु ८०, रामतोरइ रु ६०, भन्टा रु ६०, परवल रु ६०, स्कुस रु ३०, बन्दा रु ४०, गोलभेडा रु ५०, घिरौला रु ४०, लौका रु ५० मा बिक्री भइरहेको छ । लगातार वर्षा भएपछि हरियो तरकारीको आपुर्ति कम भएको र माग बढी भएको कारण तरकारीको मूल्य बढेको तरकारी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । पर्सा जिल्लामा कुल खपतको ३० प्रतिशत मात्र हरियो तरकारी उत्पादन हुन्छ, बाँकी ७० प्रतिशत बारा, मकवानपुर र छिमेकी भारतबाट आपूर्ति हुन्छ । भारतबाट प्याज, आलु, परवल, खुर्सानी, आउँछ भने बोडी, भन्टा, लौका,
दशैं कपमा वनशक्ति ‘बी’लाई सफलता
प्रस, ठोरी, ११ असोज/ ठोरीमा जारी दशैं कप पूmटबल प्रतियोगिताको मङ्गलवारको खेलमा आयोजक वनशक्ति युवा क्लब ‘बी’ विजयी भएको छ । सन्दिप श्रेष्ठले गरेको एक मात्र निर्णायक गोलले जनचेतना युवा क्लब ‘बी’ पराजित भएको हो । खेलको दोस्रो हाफमा पाएको सुन्दर मौकाको सदुपयोग गर्दै श्रेष्ठले वनशक्तिलाई विजय दिलाए । हारसँगै जनचेतना युवा क्लब ‘बी’ प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । ब्यारेक डाँडाको खेल मैदानमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधवारको खेल समूह ‘ए’ अन्तर्गत युवा हरियाली क्लब ठोरी–५ र नयाँबस्ती युवा क्लब निर्मलबस्तीबीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक वनशक्ति युवा क्लबका अध्यक्ष धीरसिंह घिमिरेले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा ठोरी, निर्मलबस्ती, बढनिहार र चितवनको माडी गरी १३ टीमको सहभागिता रहेको छ ।
छनोट प्रतियोगिताको चार खेल सम्पन्न
प्रस, वीरगंज, ११ असोज/ सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि वीरगंजमा सञ्चालित छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज चारवटा खेल सम्पन्न भएको छ । आदर्शनगर रङ्गशालामा खो–खो र कबड्डीका खेलाडी छनोट प्रतियोगिता सम्पन्न भयो भने पूmटबल छनोट नारायणी रङ्गशाला र बुद्धिचाल जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साको कार्यालय कबर्ड हलमा सम्पन्न भएको छ । आज भएको छनोट खेलमा बुद्धिचालमा ३ महिला र ३ पुरुष छनोट भएको बताइएको छ । पुरुषतर्पm सिद्धार्थ वत्स, पैmसल अली, महम्मद अजरुद्दिन अन्सारी र महिलातर्पm बिन्दिरा अधिकारी, समीक्ष्Fा राउत, विशाखा खण्डेलवाल छनोट भएको जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साका अध्यक्ष्F सुदीप पौडेलले बताए । यसैगरी कबड्डीमा १० जना छनोट भएका छन् भने खो–खोमा १२ महिला, १२ पुरुष र पूmटबलमा १८ पुरुष छनोट भएको अध्यक्ष्F पौडेलले बताए । कार्यक्रममा बुद्धिचाल सङ्घ पर्साका अध्यक्ष सुबोध पौडेल, संयोजक नीरज वर्णवाल, समितिका कार्यालय प्रमुख शिवनारायण साहको सहभागिता थियो ।
प्रचण्ड, भारत र उपलब्धि
विनोद गुप्ता राजनीति फोहर खेल हो भनिन्छ तर राजनीतिबिना देश चल्दैन । तर राजनीतिकै एउटा अंश कूटनीति हो जुन संयम र शालीनताबाट सञ्चालित हुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतबाट फर्किनु पूर्वसन्ध्यामा नेपालकै बहुचर्चित संवैधानिक अङ्ग ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ले एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने घोषणा ग¥यो । घोषणा लगत्तै अर्का माओवादी नेता वर्षमान पुनःको वक्तव्य आयो– यो बार्गेनिङ हो भनेर । केको बार्गेनिङ भनेर बुझ्दा सर्वोच्च अदालतले अदुअआका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिका सम्बन्धमा त्यसै अदालतमा भएको पूर्व निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने अवस्था देखेर नियुक्ति सम्बन्धी फाइल झिकाउने आदेश जारी ग¥यो । कुरा यति मात्र हो तर कूटनैतिक सन्देश के हो भनेर विश्लेषण गर्दा सर्वप्रथम त माओवादीका सुप्रिमोको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको छवि धूमिल भयो र यसलाई हतारमा टिप्पणी गर्दै वर्षमान पुनले भ्रष्टाचार भएको कुरालाई स्वीकार गरे । उनले यो बार्गेनिङ हो नभनेर संवैधानिक निकायले आप्mनो कर्तव्य पालना गरेको हो र छानबिनबाट सत्यतथ्य बाहिर आउने
गर्ने कि नगर्ने ?
एउटा प्रसिद्ध उखान छ, गरीब भएर जन्मनु अभिशाप होइन, गरीब मर्नु चाहिं अभिशाप हो । यसको आशय गरीब भएर जन्मनु आप्mनो हातमा हुँदैन तर गरीब भएर मर्नु भनेको क्रियाहीनता हो । आजको विश्वमा कोही पनि मानिस यदि शिक्ष्Fित छ, सीप जानेको वा सिकेको छ, अध्यवसायी छ भने उसले गरीब भएर मर्नुपर्दैन । यो भनाइ जति व्यक्तिको लागि सटिक छ, त्यति नै देशको लागि पनि छ । त्यसैले नेपाल गरीब हुनुमा जेजति परिस्थिति जिम्मेवार भए पनि, त्यसैको अत्तो थापेर रोइरहनुको कुनै अर्थ छैन । अध्यवसाय गर्नुपर्छ, तर यो गर्ने जिम्मा पाएका राजनीतिक दलहरू भने काम गर्नु नपरोस् भनेर विभिन्न अडङ्गा थाप्दै हिंड्छन् । कुरा भौतिक विकासको मात्र होइन, वैचारिकता पनि क्रियाहीन भएको अवस्थाले देशलाई कहिले पनि उँभो लाग्न दिंदैन । पहिलो कुरा विचार हो, विचारले नै कर्मलाई अघि सार्ने हो । विचार कलुषित छ, व्यक्तिमा अन्तर्निहित छ, रचनात्मक छैन भने कर्म अघि सर्नै सक्दैन, स¥यो भने पनि विपरीत दिशा, प्रतिगमनतिर मात्र सर्छ । तर नेपालमा वैचारिक रूढतालाई त प्रतिगमन नै मानिंदैन । प्रतिगमन त राजनीतिमा मात्र हुन्छ भन्ने धारणा विद्यमान भएकोले हिजोको पञ्चायतकालपछि
२०७३ असोज ११ गते मङ्गलवार
२०७३ असोज ११ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
साझेदारी वनको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न माग
साझेदारीको चुनाव रोक्न वन अधिकृत विभागमा तानिए प्रस, वीरगंज, १० असोज/ वनमन्त्रीको निर्देशनमा जिल्ला वन कार्यालय पर्साका प्रमुख वन अधिकृत चन्द्रदेवलाल कर्णलाई आज विभागमा हाजिर हुन बोलाइएको छ । वनमन्त्री शङ्कर ज्ञवालीको निर्देशनमा वन विभागका डिजी कृष्णप्रसाद आचार्यले मौखिक आदेशमा वन अधिकृत कर्णलाई विभागमा हाजिर हुन बोलाएका र उनी गएको बताइएको छ । जिल्ला वन कर्यालय पर्सा मातहतमा रहेको सरकारी वनलाई सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्न बनाएको बिन्दावासिनी कोइलाभार वन व्यवस्थापन साझेदारीको लागि असोज १२,१३ गते हुने निर्वाचन नरोकेको कारण कर्णलाई विभागले बोलाएको स्रोतले जनाएको छ । विगत ५ वर्षदेखि सो सझेदारीको चुनाव रोकिएको थियो । पटकपटक चुनाव गराउन खोज्दा नेपाली काङ्गे्रसले चुनाव हुन नदिएको कर्मचारीहरूले बताए । विभिन्न कारण देखाई अहिलेसम्म चुनाव भाँड्दै आएका राजनीतिक दलहरूको कारण साझेदारीमा १५ हजार क्युफिट काठ सडिरहेको छ । वन अधिकृत कर्ण आएपछि चुनाव गराउन पहल शुरु हुँदा विवाद शुरु भएको थियो । वनमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका भएका र नेका कार्यकर्ताहरूले चुनाव हुन नदिने नियत राखेपछि नि